Sales & Marketing Staff Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ ၁ ) Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Fashion အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။ - ရု​ပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ တာဝန်ယူလိုစိတ်အပြည့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၃၀ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တနင်္ဂ​နွေ နှင့်​အစိုးရ ရုံးပိတ်​ရက်​များပိတ်​သည်​။ - မင်္ဂလာ​တာင်ညွှန့်​​​မြို.နယ်တွင်ရှိ​သော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁)Sales & Marketing Staff - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သီလ၀ါမြို့နယ် ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • English စာရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်နှင့် ( ၃၀ ) ကြားဖြစ်ရမည်။ • Computer အနည်းငယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • သီလ၀ါမြို့နယ် တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါမြို့နယ် တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။
၁) Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • Sales & Marketing ပိုင်း နှင့်ပတ်သက်၍အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ် မှ ( ၃၅ ) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်း ရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ နေ့တစ်ဝက် ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Engineering Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Male/Female - (5) Posts
၁) Sales & Marketing Staff – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်+++ /ကမာရွတ်မြို့နယ် ။ •	အိမ်ခြံမြေ အတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ •	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer ( Word,Excel,Internet &Email ) အသုံးပြုနိုင် ရမည်။ •	အသက် ( ၂၉ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ •	ကားမောင်းတတ်သူဦးစားပေးမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကမာရွတ်တွင်ရှိသော Real Estate Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts
Location in : အရှေ့ ဒဂုံ
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ ၁) Sales & Marketing Staff – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	ဆယ်တန်းအောင် ( သို့ ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ဘွဲ့ရဖြစ်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ •	အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ •	အသက် ( ၂၀ - ၃၀ ) နှစ်ကြားရှိရမည်။ •	တစ်ခါတစ်ရံ နယ်သွားနိုင်ရမည်။ •	နေစားငြိမ်း နေနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံပေါ် မှုတည်၍ လစာညှိနှိုင်း နိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Staff - Female - (10) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Digital Printing Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales & Marketing Staff - Female - (10) Posts /လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်+%/ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Printing နှင့် Vinyl လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ရုံးကားဖြင့်အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ - တပတ်(၁)ရက်အလှည့်ကျပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09957693793, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09263121101, 09977397705 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Male /Female (5)Posts/ လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Furniture Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ ၁) Sales & Marketing Staff – Male /Female (5)Posts/ လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ပရိဘောဂ အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Staff & Medical Representative – Male - (5) Posts /လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales & Marketing Staff & Medical Representative – Male - (5) Posts /လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - Medical ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်ဖြင့်အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - စနေနေ့တ၀က်ပိတ်သည်။ - ဖယ်ရီရှိသည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Male - (5)Posts /လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - Medicalပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Person – Male /Female (10)Posts/ လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ကျပ်+အရောင်းကော်မရှင်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းတွင်ရှိသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1. Sales & Marketing Person – Male /Female (10)Posts/ လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ကျပ်+အရောင်းကော်မရှင်/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။(သို့) အဝေးသင်ဖြင့်ကျောင်းဆက်မတက်သူ များလျှောက်ထားနိုင်သည်။
- Sales & Marketing ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။
- Marketing Certificate တစ်ခုခုရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
- ဘာသာခြား company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com
Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785
Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101
ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁။ Sales & Marketing Staff – Female (5) Posts /လစာ - ၁၂၀,၀၀၀++ ကျပ်/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရ (သို့) ၁၀ တန်းအောင် - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - တစ်ခါတစ်ရံနယ်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၆:၀၀ နာရီ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09 977397705 , 09- 263121101 , 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Digital Printing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Staff – Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - Media ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Staff – Male (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အလုံမြို့နယ် Engineering Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။
1. Sales & Marketing Staff – Male (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက် ) / အလုံမြို့နယ် • ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ • ဆေးအရောင်းပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ • အပြင်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • နယ်ခရီးထွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (9:00 – 5:00 ) • ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing – Female (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောTravels & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
1. Sales & Marketing – Female (5)Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
- Travels & Tour ပိုင်းဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
- Computer (Word,Excel,Internet & Email ) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Sales & Marketing Staff – Male/Female - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Fashion Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိပါသည်။ Sales & Marketing Staff – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်။ - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - အရောင်းပိုင်းတွင် 1 နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - Fashion ပိုင်းအရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အပြင်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရုံးကားဖြင့် နယ်သွားနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 – 5:30) ။ - တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ ( မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )